Avy any ivelany ny olona mizara ny toro-hevitra ny amin'ny fomba manakarama ireo vehivavy tanora ao Shina, ny global times" - Ny LAHATSARY amin'ny CHAT maneran-tany! Ny firenena rehetra, vahiny, ny tontolo izao.
Avy any ivelany ny olona mizara ny toro-hevitra ny amin'ny fomba manakarama ireo vehivavy tanora ao Shina, ny global times"
taona Lee (solon'anarana) avy any Kalifornia
Ny fihetseham-po tao ShinaMpilalao hira Jung Il, ny teknika eo amin'ny lamba, ary ny mahafatifaty sy hamitaka andraikitry ny vehivavy mpitarika niteraka adihevitra teo amin'ny toerana ara-tsosialy ao Shina.
Lehilahy sinoa no nitsikera (matetika amin'ny vehivavy Shinoa) ho an'ny ny tsy fahampian'ny tantaram-pitiavana idealy ary noho ny tsy maha-afaka fitsarana ny vehivavy miaraka amin'ny fomba sy ny fitiavana.
Ny ankizivavy, angamba roa na telo lahy, dia miantso azy
Mazava ho azy, maro ny Tandrefana ny olona manana ny fomban-drazana ny olon-tiany sy ny fomba fijery ny fahafahana mpiaro ny vehivavy teo amin'ny tongony. Ny Global Times niresaka efatra vahiny ny olona momba ny fomba mety mampijaly na manadala vehivavy Shinoa sy ny fomba mba handresy ny fon'ny vehivavy iray tao Shanghai. Araka ny azy, any Etazonia, misy ireo dingana samihafa Mampiaraka, avy ny fivoriana voalohany eo amin'ny sehatra ny olon-tiany sy ny olon-tiany. Nilaza izy fa ny manintona ny vehivavy fa izy mahalala izay hoe amin'ny fotoana samy hafa. Ao amin'ny dingana voalohany ny famoriam-bola, ny toro-hevitra dia: matoky sy ny fomba ny zazavavy haingana araka izay azo atao.Ny teknika ampiasaina ao an-trano dia mba manatona azy amin'ny dimy segondra, kivy, ary avy eo dia mandoa ny fiderana,"Lee hoe. Nilaza izy fa ny fiderana dia tsy tokony ho generic (ohatra,"tsara tarehy"na"ianao dia manify"). Fa tsy izany ny lehilahy iray dia tokony hijery ny tovovavy tsara hoe inona no mahatonga azy tsy mitovy amin'ny hafa.
Izy angamba no manintona ny maso, na angamba izy mampiasa ny firavaka amin'ny fomba.
Toy izany koa ny zazavavy mahafantatra lehilahy io, dia tsy hoe generic zavatra, dia ny mijery azy, Lee hoe. Indray mandeha nisy lehilahy iray nanatona ny ankizivavy sy ny sary an-tsaina fa ny dingana manaraka dia ny mangataka ny fandoavam-bola. Fa Lee dia nilaza fa tsy dia tsara ny maka ny fotoana mba manana resaka andavanandro amin'ny tovovavy sy hahazo anjara mialoha ny fanontaniana karama intsony. Ny fampidirana ny resaka, Lee nanamafy fa ny lehilahy tsy dia miresaka loatra momba ny tenany rehetra dia tsy maintsy atao dia ny manolotra ny sasany mora vaovao mba hahatonga ny tovovavy aina, mizara ny sasany ny antsipirihany."Ny tanjona dia mba ho aina sy manomana azy mba hanome ny isan'ny Ohatra, rehefa mahita rehefa mandeha any amin'ny trano fidiovana, rehefa mahita zavatra izay mampiseho ny ao anaty hato-tanana na g-string, na ny fanontaniana momba ny kitapom-bola, izany dia mampiseho fa ianao manomboka matoky ny tenanao,"Lee hoe,"saingy raha manenjana ny sandry na hamaly amin'ny teny iray na roa, tsy dia famantarana tsara."Avy eo, ny fampiasana ny finday maro, na ny an-trano maro, izay no dingana manaraka mba hifandray amin'ny olona. Saingy ny manan-danja ny dingana ity dia ny mahafantatra ny fotoana. Any Amerika, Lee hoe, ny lehilahy matetika miandry ny roa na telo andro mialoha ny fiantsoana mba hampisehoana fa izy ireo dia tsy mamoy fo. Manoro hevitra rehefa ny olona iray dia mila ny antso, ka dia ho fantatrao fa mendrika ny hanaovana ny fitandremana mifandray. Fa ny hampiseho amiko fa mendrika ny tsy mampiseho. Azonao atao ny mampiseho ny sata, ny anao no mahatonga azy tsara tarehy. Raha hitanao fa manana ny lanjany sy ho tsaratsara kokoa noho ny hafa ny lahy, dia afaka mivoaka aminy."Ny lehilahy iray ny aretin'andoha amin'ny dingana ity ny antso dia ny fitadiavana ny zavatra mba hiresaka momba. Mahantra safidy ny lohahevitra na ny fahanginana no mandrebireby sy tsy mitarika ny olona te daty ianao. Lee dia nilaza tamiko fa tokony hihaino amim-pitandremana rehefa mandre zavatra ny tovovavy no miresaka."Ihany rehefa manomboka ny mihaino azy dia afaka mahazo izay tianao mba hiresaka momba. Ohatra, raha toa ka nilaza izy fa nandeha ho any amin'ny fanaovana fanatanjahan-tena ao amin'ny maraina, dia hilaza hoe:"dia nandeha aho,"ary avy eo dia afaka miresaka bebe kokoa momba izany,"Lee dia nilaza hoe:"tsy ny momba anao sy ny resaka, fa mba hanazava ny olon-kafa."Raha vao mifantoka amin'ny olon-kafa, ny foto-kevitra tonga ho azy. Antonio (solon'anarana), izay any amin'ny afovoan'ny izany, dia espaniola mpifindra-monina, ary ireo izay nihaona taminy izy nanao azy ho olom-pirenena, vehivavy sasany no tena liana azy."Toy ny vahiny, maro ny tovovavy hahita ahy tsara tarehy izy ireo satria hahazo ny fahatsapana fa izao tontolo izao aho avy any dia samy hafa sy ny ody,"hoy i Antonio. Fa tsy toy ny maro niala ny tanindrazany izay mirehareha ny amin'ny maha-vahiny sy ny toerana efa tonga izy, dia aleony mba hanesorana misy hevitra ny vehivavy fa izy dia avy tsaratsara kokoa ny firenena, na amin'ny fomba tsara lavitra noho izany". Ny vehivavy amin'ny fikasana tsara, mankasitraka ahy ny fahamarinan-toetra sy hatsaram-panahy. Ny fomba tsara, ny fomba amim-pahatsorana sy tamim-pirahalahiana ny fomba Antonio naka ny ankizivavy:"ny zava-Miafina izay mihevitra ny vehivavy ho izy ireo manana mahafinaritra ahy, fa ny hevitra."Nihaona tamin'ny tovovavy ivelan'ny trano ho an'ny kafe na zavatra hafa fa mety hahatonga azy hahatsapa azo antoka mandritra ny andro. Avy eo izy dia angataho izay tiany ny handeha. Teny an-dalana ny akaiky indrindra metro station dia tampoka teo dia hoe:"mila ny akanjo lava."Moa ve ianao an-tsaina raha handeha aho, ary hahazo ny akanjo?"Velona aho eto."Ary indrindra ny tovovavy dia nandeha niaraka taminy. Indray mandeha aho dia nahazo ny trano, dia nataony teo amin'ny fandriana, ary izaho mbola nipetraka toeran-kafa lavitra ny sasany izy noho izany fa izy dia mahatsapa soa aman-tsara. Fa raha izy nipetraka teo am-parafara, dia afaka ny hahita ny gitara tao amin'ny zorony ny efitrano fandraisam-bahiny. Avy eo ianao dia te hanontany aho raha milalao ny gitara."Avy eo izy dia mety hitondra ho anao ny gitara, ary ny ankizivavy dia mipetraka ao ny hafa seza, akaiky kokoa."Avy tao izy no afaka mandeha any an-efitra sy ny mijery izany piano. Indrindra ny ankizivavy, mazava ho azy, dia liana ary nanontany raha toa ka nilalao piano. Noho izany izy sy ny ankizivavy nipetraka teo amin'ny lafiny ilany tao amin'ny piano.
Izy no mitana ny zavatra ho anao, ary avy eo dia mangataka anao mba hirao ny zavatra miaraka aminy.
Ary avy eo dia ho tanteraka izany ho azy. Dia nanoroka sy nandany andro sisa ao an-tranoko sy ny ankizivavy nihevitra fa ny hevitra mba manana mahafinaritra ahy, Antonio hoy. Nilaza izy fa fitaka izany miasa foana, afa-tsy amin'ny olona iray - ilay zazavavy dia lasa vadiny. Dia izy izay nandà tsy tonga ny trano ary nanao izay tena sarotra ho azy ireo ny fitiavany ahy. Matetika isika hanambady toy ny vehivavy dia tsy mora, ary ny vehivavy izay tena hametraka be dia be ny ezaka ao amintsika, hoy Antonio. Jay Thornhill dia ny Amerikana iray izay mitantana ny raharaham-barotra amin'ny aterineto (bacopa) tao Shanghai. Nanontany aho hoe: tovovavy Shinoa izay mihevitra izy ireo Shinoa ankizilahy afaka manao tsaratsara kokoa, ary maro ny milaza fa Shinoa ankizilahy hifindra haingana loatra ny manao hitsambikina ho amin'ny fifandraisana matotra. Tsy mamorona zava-tsarotra ho amin'ny ankizivavy, Thornhill hoy. Hoy izy hoe,"ny Lehilahy sy ny vehivavy izay efa voasarika ho zava-tsarotra, raha toa ka misy zavatra na olona toa sarotra tratrarina izany, mahazo ny lanjany ambony kokoa."Ary avy eo ianao maika ny mihevitra fa ny tovovavy tena tia anao, ary ny lehilahy an'ny anao,"Thornhill hoy."Noho izany dia tsy hanaiky ny hafatra fa ny ankizivavy mandefa isan-andro, ary manantena fa ianao no mamaly toy ny namana. Hoy izy:"Raha zazalahy dia nandeha sy nanao ny tovovavy tahaka izany, dia mety mieritreritra fa tsy mendrika izany, ary nandoa ny saina bebe kokoa ny ankizilahy, izay sarotra kokoa."Thornhill nanolo-kevitra fa ny olona dia tokony ho kely miadana kokoa ary manam-paharetana. Angataho ny ankizivavy kely iray fanontaniana, manontany tena hoe:"Raha tia ahy na tsy,"ary aza mba tapaka ny mitandrina - unpredictably. Hoy izy:"Raha misy lehilahy iray mandeha amin'ny trano fisotroana na fikambanana izay mitady vehivavy, ny zava-dehibe indrindra dia ny mandeha amin'ny vondrona ny namana, sy ny ataovy azo antoka fa manana mahafinaritra kokoa noho ny olon-kafa ao amin'ny bar, fa tsy ny fanaovana antoka fa ny asa fitoriana dia ny mahazo ny ankizivavy."Fa raha ianao no super sambatra, ary raha toa ianao ka manana ny mahafinaritra, ny olona dia mijery anao ary mazava ho tia anao. Ezio (antsoina hoe) dia ny Frantsay izay mino fa matetika ny olona no diso fandray ny zavatra olon-tiany dia. Nilaza zavatra toy izao izy"ianao tsara tarehy", na"ny diamondra ao amin'ny maso", dia matetika heverina ho tantaram-pitiavana, fa ny teny dia matetika fisaka sy ny dikany. Zavatra tantaram-pitiavana dia matetika tena manokana, matetika tena an-kolaka sy tsotra, fa izany dia midika hoe be dia be noho izay, ny fotoana sy ny fomba izany no atao. Manana ny ivelan'ny trano aho, dia hametraka ny raozy eny an-davarangana aho fa hoso-doko, ny manontolo ny sisin-dalana amin'ny tsaoka manoloana ny vehivavy sakaizany, ny trano mba gaga izy ireo rehefa nandeha ny asa izay nividy sy mametraka fanomezam-pahasoavana manokana ao amin'ny toerana sasany mba manampoka azy amin'ny kisendrasendra fotoana nandritra ny taona,"hoy Ezio. Raha maro ny olona hanatona ny ankizivavy ao ao ny ara-dalàna ny fametrahana, Ezio milaza fa raha toa ka hita ny zazavavy mahaliana, na aiza na aiza izy, izy no miresaka ny ankizivavy. Na fisotroana, fikambanana, trano fisakafoanana, fivarotana lehibe, fiara fitateram-bahoaka intsony:"Raha mbola tsy tena tsotra sy tsy mampatahotra, ny olona miezaka ny mankasitraka tsotra, mora resaka.
Izany dia matetika ampy foana na any mahafinaritra sy playful toe-draharaha.
Ny olona manerana izao tontolo izao dia mitovy.
Tiany mba manana mahafinaritra sy hihaona mahaliana ny olona. Raha Shinoa ny olona mazàna no mihevitra fa ny fahasambarana, ny asa sy ny sata ara-tsosialy ho manintona kokoa ny vehivavy, Ezio nilaza fa efa mitovy ny kolontsaina, fa ny frantsay no ny lehilahy kokoa mba hahatonga ny tombontsoa tsara tarehy kokoa. Fa tsy mampiseho izany mialoha na mampiseho izany eny, matetika ianao tsy milaza na inona na inona, ary aoka ny olona hafa nahita izany fa miasa ho toy ny bonus rehefa misambotra amin'ny zazavavy mahaliana:"mihevitra Izy fa inona no mahatonga ny frantsay hafa fa ny ankamaroan'izy ireo dia tsy teny frantsay. fotoana izy ireo no mampiady ny lafiny."Koa isika manao zavatra izay tena mahabe resaka. Ohatra, ny mpivarotra ny fanafarana sy fanondranana entana mandritra ny andro, elektrika DJ amin'ny alina, na ny mpamily ny hazakazaka fiarakodia amin'ny faran'ny herinandro dia afaka ny ho".
Amritsar lahatsary chats. Mampiaraka toerana"Amritsar"dia misy
ny lahatsary amin'ny chat ny taona video internet aterineto tsy misy fisoratana anarana amin'ny chat roulette plus miaraka amin'ny ankizivavy Mampiaraka toerana ho an'ny lehibe ny lahatsary amin'ny chat maimaim-poana amin'ny aterineto Fiarahana ho an'ny fifandraisana fantaro ny lahatsary amin'ny chat room Mampiaraka vehivavy video ny lahatsary amin'ny chat online fampitana